Petit Filous Dị Iche Iche Isi Frais 18 X47g | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Petits Filous Variety Fromage Frais 18 X47g– Ordrs
Petit Filous dịgasị iche iche site na Frais 18 X47g
Fraage a na-etinye na Vitamin D
Nri dị iche iche na nke ziri ezi dị mkpa dịka akụkụ nke ndụ ndụ siri ike.
Petits Filous bụ ihe kachasị ere ụmụaka Yogurt na Fromage Frais, nke zuru oke maka nri ma ọ bụ nri ụtụtụ!
Petits Filous Obere ite ma ọ bụ Nnukwu ite, Strawberry, Rasberi, Banana ma ọ bụ Aprịkọt ekpomeekpo, zuru oke maka ụmụaka nke afọ niile!
Petits Filous Fromage Frais pots nwere Vitamin D & Calcium maka ụmụaka siri ike ọkpụkpụ iji nyere ụmụ gị aka ịmalite ụtụtụ ha maka nri ụtụtụ ma ọ bụ mechie nri dị ka nri dị mfe, na-enyere ha aka ịnọ ọrụ ụbọchị niile.
Mere na mmiri ara ehi ohuru
100% nke sitere n'okike emere
Enweghị mkpụrụ osisi
Enweghị agba agba, flavors ma ọ bụ sweeteners
Onweghị ọgwụ nchekwa agbakwunyere
Ngwugwu ngwugwu: 846g
Achọrọ calcium na vitamin D maka uto na mmepe nke ọkpụkpụ na ụmụaka